inkathi yokuguga ubizwa ngokuthi menopause e abesifazane Kwenzeka ngezigaba ezintathu:
Ngo premenopausal kancane kancane kuqale nokuqala ukwenzeka ukushintsha kwama-hormone futhi umzimba emzimbeni womuntu wesifazane. Phakathi nale nkathi yomzimba wowesifazane incipha amazinga estrogen futhi babe linqoba hormone wesilisa.
Ezinye kwezitho nezicubu bayakwazi ukukhiqiza inani elincane i-estrogen, ezifana adipose izicubu. Ngenxa yalesi, abesifazane ukhuluphele estrogen ezingeni lisetudlwana abesifazane postmenopausal. Liphinde encishisiwe, bese iyama ngokuphelele kwezici progesterone-hormone okuthiwa i ikhiqizwa kuphela ngemva ukukhiqizwa kwamaqanda.
Zonke lezi zinqubo kuholele yomzimba wowesifazane ukuze ukucindezeleka nemibi ukubonakaliswa okukhulu, isiqalo nesigcino othiwa - "syndrome climacteric".
kuwukubonakaliswa lokhu imvamisa sifo ngo abesifazane kwasekuqaleni incike izimo zokuphila, umsebenzi noma impilo yabo. ERussia, kusukela ngo-1980 kuya ku 2002 Inkomba syndrome climacteric lenyuka lisuka kwabangaba 37% kuya ku-80%. EJapane, isibonelo, izinga uhlala ezingeni elifanayo futhi ingeqi 36%.
Premenopausal futhi menopausal ukuthuthukiswa climacteric syndrome kuzibonakalisa izimpawu ezifana ukucasuka, ukukhathala, ukuqwasha, amazinga aphezulu okukhathazeka, njll Futhi iyatholakala lezi zinkinga semithambo.
Ngo postmenopausal kungase kudingeke khona yingozi nakakhulu - ukuthuthukiswa izifo zenhliziyo nemithambo yegazi, ukukhumuzeka kwamathambo, futhi ukuvela izimila abulalayo webele, wesibeletho kanye endometrial.
abesifazane Postmenopausal - isigaba ephezulu ingozi yesifo senhliziyo. isifo senhliziyo kwabesifazane ngalesi sikhathi zivame ukubonakala ifomu nomfutho wegazi ophezulu nesifo senhliziyo nemithambo yayo futhi.
Futhi, lapho zenzo ziwukubonakaliswa siyingoti izinguquko zenhliziyo nezifo - arrhythmia inhliziyo kubangelwa izinguquko ezithile esivimba amanzi ngenxa ezingeni esincishisiwe estrogen igazi.
abesifazane othandekayo, bawuthatha ngokungathí sina zempilo yabo. Qala nokuzinakekela wena uqobo manje ekukhiqizeni laseSiberia Impilo Corporation, ozokusiza ukuba zidonse intsha futhi balinganisele umzimba wakho kule nkathi nzima yimuphi owesifazane - nambili kuya kwabadala.
Ngokwesibonelo, ukulungiswa Corporation laseSiberia Impilo "Karnitrin" buyindlela esisemqoka ukugcinwa esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, njengoba kusiza ukunciphisa cholesterol kanye siyehla kumiswa zingcwecwe semithambo. Ngaphezu kwalokho, lokhu izidakamizwa has nezinye izakhiwo eziningana ezingasiza abesifazane abahlala imodi evamile phakathi kwabadala.
Ngenxa yokuthi abantu besifazane abaneminyaka engama-50 liye landa kancane kancane okwandisa ingozi yokuthola izifo eziphathelene nenhliziyo ngenxa kabusha jikelele zomzimba, Karnitrin ngesikhathi menopause Kunconywa bonke abesifazane njalo.
The main isithako zomuthi L-carnitine - into yemvelo okuyinto ekhuthaza of acid ezimbili acid, futhi lifana amavithamini yeqembu B. L-carnitine (L-carnitine) ngaleyo ndlela ukhonza i stimulator asebenzayo izinqubo umzimba, ubuthi, ulwelwesi ithuthukisa intercellular septa . L-carnitine ivikela amaseli ngokumelene radicals khulula futhi endotoxin, kanjalo uvimbele ukudala ezinye ukuthuthukiswa neoplasms ebulalayo. Okubalulekile impahla levocarnitine - ukukhuthaza ukusetshenziswa kwamafutha, okuyinto ikuvumela ukuba alondoloze isisindo esinempilo singenzi lutho olwengeziwe, kanjalo ugweme izinkinga zempilo ngokuphepha, okuyizinto ezihlobene ukukhuluphala nokukhuluphala ngokweqile.
Yingakho abantu ubudala ovuthiwe, futhi abesifazane nje kuphela kodwa futhi amadoda, isicelo Karnitrina uyosindisa impilo iminyaka eminingi futhi Ukuphila futhi umhlalaphansi asebenzayo.
Ukuqonda izinqubo ezenzeka ngobudala unolwazi indlela sowesimame nokwenza okunomsoco nge ukufakwa ekudleni ebalulekile izinto umzimba kungakusiza ukuba ugweme noma kakhulu ukunciphisa ukubukeka nobuntu izinkinga yobudala
Vakashela isitolo inthanethi Impilo aseSiberia eMoscow futhi uthole izeluleko kongoti nganoma yisiphi isikhathi esikahle kuwe.
Ngifisa sengathi ngabe eside intsha, ubuhle nempilo!
Kusho ukuthini uma 2 usuku usalindeleni? kokuya esikhathini Ibambezelekile
Indlela ukuphefumula ngesikhathi sokubeletha bese ngesikhathi sokubeletha. Inqubo bokubeletha. Ukujwayelana Jikelele.
Indlela isathela? amasu inzalo zesifazane. NoTubhali Ligation: ngobuhle nangobubi bawo
Kufinyeta: ukuzwa futhi isizathu
Omkhulu onesiqhova penguin: incazelo kanye nezithombe
Antonov Aircraft umklami Oleg Antonov: Biography
Umkhiqizo "ibuprofen": analogue, imfundo
Saw izinsimbi: kanjani ukukhetha?
Goran Ivanisevic - ukondla yinkosi phezu indiza
Indlela yokuhlonza izinhlobo zesikhumba.
"Sertamicol" (isisombululo) kusuka ku-fungus. Imiyalo yokusetshenziswa, ukubuyekezwa, okufanayo